ဝါးခယ်မ : ဦးရွှေမန်း အကြောင်း တစ်စေ.တစ်စောင်း
❖ စေတနာ၊ မေတ္တာ၊ စာနာမှုများဖြင့် မိမိအားမေးမြန်းကြသည့် ပြည်သူများအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
❖ ပြည်သူလူထု၏ မေတ္တာ၊ စေတနာကို အလေးထား လေးစားတန်ဖိုးထားပြီး၊ ပြည်သူများ၏ ကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက် ပြည်သူများနှင့်အတူ
အထက်ပါ စာက ၂၀၁၅ သြဂုတ်လ ၁၂ရက်ည သန်းခေါင်ယံ ကိစ္စရပ်အပြီး ဦးရွှေမန်းရဲ. ပထမဆုံး လူထုကို သူ.ရဲ. Facebook မှတစ်ဆင်.၂၀၁၅ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက် ညနေပိုင်းမှာ ပြောကြားလာတဲ့ စကားပါ ။
ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်များနဲ. ပတ်သက်ပြီး ရေးသားပြောဆိုဝေဖန်ခန်.မှန်း မှုများက အချိန်အတန်ကြာကပင် ရှိနေခဲ.ပြီး ဖြစ်ပါတယ် ။အဲ့ဒီအထဲကမှ ဦးရွှေမန်းနဲ. ပတ်သက်လို. လက်လှမ်မှီသမျှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို စုစည်းဖော်ပြပါမယ် ။
ဦးရွှေမန်း နဲ. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
From DFB Wordpress
ဦးရွှေမန်းအနေနဲ.၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ၆ လအလိုမှာ အပြီးပြင်ဆင်မယ်လို့ လွှတ်တော်ကို တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ဖူးပေမယ်. နောက်ပိုင်းမှာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး လွှတ်တော်မှာ အတည်ပြုပြင်ဆင်နိုင်မယ်လို. ၂၀၁၄ နိုဝင်ဘာ တွင်ပြောကြားခဲ.ပါတယ် ။အဲ့ဒီမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာက NLD ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီစကားကို ထောက်ခံကြိုဆိုကြောင်းပြောလာခဲ့တာပါပဲ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်လည်း အခြေခံဥပဒေကို ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ပြင်ဆင်မယ်လို.ပြည်သူကို ကတိတွေပေးခဲ့ပြီးကာမှ ဦးရွှေမန်းရဲ.
နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ နေပြည်တော်၊ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံမှာ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှ ပြင်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက်ကို ထောက်ခံခြင်းအား နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းက နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုများ ရှိခဲ့သလို သူတို့ ၂ ဦးကြားမှာ နိုင်ငံရေးအပေးအယူတွေ သေချာပေါက်ရှိနေပြီလို့ တွက်ဆမှုတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ် ။ ဒါ.အပြင် သူတို.နှစ်ဦးချင်းဆွေးနွေး မှုတွေဟာလည်း ပြင်ပကိုဝေးလို. သူတို.ရဲ. ပါတီတွင်းမှာတောင် ချမပြခဲ့ဖူးလို.လည်း ကြားရပြန်ပါတယ် ။
၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးက ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ် ပေါ်ထွန်းရေး၊ တိုင်းရင်းသား တန်းတူညီအခွင့်အရေး ရရှိရေး၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေးအတွက် သက်ရောက်မှု များစွာရှိပြီး တိုင်းရင်းသားအများစုက ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖို့ လိုလားနေကြပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မပြင်ဆင်ဘဲ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ်ဆိုရင် အဲဒီရွေးကောက်ပွဲကို ပါဝင်ယှဉ် ပြိုင်ခြင်းမပြုဖို့ မူဝါဒချမှတ်ထားတဲ့ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီတချို့လည်း ရှိနေတာမို့ ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့ ဦးရွှေမန်းပြောဆိုချက်ကြောင့် အခက်ကြုံကြရတယ်လို.ဆိုပါတယ် ။
ရှမ်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးစိုင်းညွန့်လွင်က “ကျနော်တို့လည်း မျက်စိလည်ကုန်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရုတ်တရက် ထထောက်ခံလိုက်တော့ သူပြောတာ ရှေ့နောက် အရမ်းကွာသွားတယ်။ သူတို့ ၂ ဦးကြားမှာ သဘောတူညီမှု တခုခုရှိမလားမသိဘူး။ တခုခုတော့ ရှိနိုင်တယ်” လို့ ဧရာဝတီကို ပြောခဲ့ပါတယ် ။
“ပြင်ဆင်ရေးမှာ အောင်မြင်သွားမယ်ဆိုရင် ဝန်ကြီးများသည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ပြောင်းလဲမှုပါသွားရင် ဒီနေ့ လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ဝန်ကြီးတွေဟာ တမျိုးတမည်တွေ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ အဲဒီအတိုင်းပဲ ဒီနေ့ လွှတ်တော်တွင်းမှာ ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ တရားသူကြီးချုပ်များကိုလည်း လွှတ်တော်က ရွေးချယ် တာဝန်ပေးတဲ့သူများ ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အကုန်လုံး ကမောက်ကမ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီဟာကို အသက်ဝင် လှုပ်ရှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် မဏ္ဍိုင်ကြီးသုံးရပ်အတွင်းမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးတော့မှ တိုင်းပြည်အတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်” လို့ ဦးရွှေမန်းက ဗီအိုအေကို ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တချို့ကတော့ ဦးရွှေမန်းရဲ့ ပြောဆိုချက်ကို သဘောမတူဘဲ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ လွှတ်တော်ရဲ့ ထောက်ခံမှု၊ လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရှိရင် ပြင်ဆင်နိုင်ပေမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ပေါ်လာမယ့် လွှတ်တော်သစ်ကျမှ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မယ်လို့ ပြောဆိုတဲ့ ဦးရွှေမန်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို နားမလည်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
“အခြေခံဥပဒေကို ၂၀၁၅ မတိုင်မီ ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်။ မဏ္ဍိုင်တွေကြားမှာ ပြဿနာမဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသည် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ပေါ်ပေါက်လာမယ့် ပထမဆုံး လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ တရားဝင် အသက်ဝင်မယ်ဆိုတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်တခု ဥပဒေတွေထဲမှာ ထပ်ဖြည့်လိုက်ရင်ကိုရပြီပဲ။ ဆိုလိုတာက ပြင်ဆင်တာ တွေအကုန်လုံးကို ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီလုပ်၊ ပြင်ဆင်ချက်တွေအသက်ဝင်မှာက ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး လွှတ်တော် ခေါ်ပြီဆိုတာနဲ့ အသက်ဝင်မယ်ဆိုတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်ပဲ လုပ်ပေးဖို့ပဲလိုတယ်။ ဦးရွှေမန်းကို နားမလည်နိုင် တော့ဘူး” လို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးက သုံးသပ်ခဲ့ပါသေးတယ် ။
အခြားတဖက်မှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD က ဆန့်ကျင်နေတဲ့ အချိုးကျကိုယ်စားပြု ရွေးကောက်ပွဲစနစ် (PR) ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက အခြေခံဥပဒေနဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့အတွက် မဲအများဆုံးအနိုင်ရတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲစနစ် (FPTP) ကိုသာကျင့်သုံးဖို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ကော်မတီဖွဲ့၊ အချိန်များစွာပေးပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတဲ့ PR စနစ်ကို ဦးရွှေမန်းရဲ့ ကြေညာချက်တခုတည်းနဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ရတဲ့ အတွက် PR ထောက်ခံတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ဦးရွှေမန်းကို အတော်ကိုမကျေမနပ် ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ သီပေါမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရဲထွန်း၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီမှ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ဇင်တို့က PR ကို လွှတ်တော်မှာ ကြိုတင်အသိမပေးဘဲ ရုတ်တရက် ရပ်ဆိုင်းမှုအပေါ် ဦးရွှေမန်းကို ဝေဖန်ခဲ့ကြပြီး အဲဒီဝေဖန်ချက်တွေမှာ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ လွှတ်တော်ကို လေးစားမှုမရှိတဲ့ ပြောဆိုချက်တွေပါဝင်လို့ဆိုပြီး ဦးရဲထွန်းနဲ့ ဦးအောင်ဇင်ကို သတိပေးဖို့ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးပါတီတာဝန်ခံတွေကို ဦးရွှေမန်းက ခေါ်ယူပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။
“ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကို ပြောင်းလဲခြင်းမပြုတော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ၊ ရွေးကောက်ပွဲစနစ် မပြင်ရင် NLD က လာမယ့်လွှတ်တော်မှာ အင်အားကြီးပါတီဖြစ်မယ်။ ပုဒ်မ ၅၉(စ) ကို ပြင်ပေးဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပေးမယ်၊ ပြင်ပေးတာ အောင်မြင်ရင်တောင်မှ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ လွှတ်တော်သစ်တွေ ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှ အဲဒါကိုကျင့်သုံးနိုင်မယ်လို့ ပြောလိုက်တာ။ အဲဒီအချက်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း မှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံလိုက်တာ။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်း သမ္မတလုပ်ချင်တယ်လို့ ထပ်ပြောလိုက်တာ။ ဦးဟံသာမြင့်က ဦးရွှေမန်း သမ္မတဖြစ်ရေး NLD က ထောက်ခံသွားမယ်လို့ပြောခဲ့တာ။ အဲဒါတွေကိုထောက်လိုက်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၂၀၂၀ ကျမှ သမ္မတလုပ်ဖို့ ၅၉(စ) ကို ပြင်ထားပေးမယ်၊ အခုလို ကြိုးစားပေးမှုအတွက် ၂၀၁၅ အလွန်မှာ NLD က ဦးရွှေမန်း သမ္မတဖြစ်ဖို့ ထောက်ခံပေးဖို့ အပြန်အလှန် သဘောတူထားကြပြီလားလို့ စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်” လို့ ဦးရဲထွန်းက သူရဲ့လူမှုကွန်ရက် ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားထားခဲ့ကြောင်း သတင်းတစ်ရပ်ကဖော်ပြရေးသားခဲ့ပါတယ် ။
NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဟံသာမြင့်က ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး NLD အနေနဲ့ သမ္မတလောင်းရာထူးအတွက် ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်စားလှယ်မရှိခဲ့ရင် လက်ရှိ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကလည်းဖြစ် အာဏာရ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သူရဦးရွှေမန်းကို ရွေးကောင်းရွေးနိုင်တယ်လို့ စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်း ထွက်ရှိလာတဲ့ Reuters သတင်းတရပ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ NLD ဘက်က ဒီသတင်းမဟုတ်မှန်ဘူးလို့ ငြင်းပယ်ခဲ့ပေမယ့် ဒီသတင်းက ခိုင်မာတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနမှ သတင်းထောက်တဦးက ဧရာဝတီကို အတည်ပြု ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ဧရာဝတီက ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။
“သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သမားအဖြစ်ယုံကြည်ပါတယ်” ဆိုပြီး NLD ပါတီကို ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်၊ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ “ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အလုပ်မဖြစ်ဘူး” ဆိုပြီး ပြင်ဆင်ပြောဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ထောက်ခံချက်ကြောင့် အမေရိကန်အပါဝင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ထိတွေ့ဆက်ဆံခွင့်တွေရရှိခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြယုဂ်တခုအဖြစ် သဘောထားဆက်ဆံတာမျိုးအထိ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်ဆံလာတာမို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်အခြေခံတဲ့ နိုင်ငံရေးမူဝါဒ အမှားတခုအဖြစ် နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းက ရှုမြင်သုံးသပ်ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူရဦးရွှေမန်းနဲ့ တပူးတွဲတွဲ တွေ့မြင်ရပြီး လွှတ်တော်တွင်းနဲ့ လွှတ် တော်ပြင်ပမှာ နီးကပ်တဲ့ ဆက်ဆံရေးရှိနေခဲ့တာပါ။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တချို့ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးရွှေမန်းကြားမှာ ပြည်သူတွေမသိနိုင်တဲ့၊ မမြင်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တွေရှိခဲ့ရင် အဲဒီပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့ နှစ်ပါးသွားနိုင်ငံရေး သဘောတူညီချက်နဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကြောင့် ပြည်သူနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ထောက်ခံယုံကြည်မှု မရှိတော့တဲ့ အခြေအနေတွေ ပေါ်ထွန်းလာနိုင်တယ်လို့ သတိပေးပြောဆိုမှုတွေ ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်အချို.က ကြိုတင်ရေးသားခဲ့ပါတယ် ။
7 Day News , Irrawaddy နှင်. သတင်းဋ္ဌာနအချို.မှ ဆောင်းပါး နှင်. သတင်းများကို အချက်အလက်အားဖြင်.သော်လည်းကောင်း ၊ အစိတ်အပိုင်းလိုက်သော်လည်းကောင်း မှီငြမ်း/ကူးယူဖော်ပြပါသည် ။
Posted by ဇာမဏီ at 7:32 PM
Labels: ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း တစ်စေ.တစ်စောင်း, သူတို. ပြောသော ယနေ. မြန်မာပြည်
ဦးတိုးနိုင်မန်း နဲ. မဇ္ဈိမ အင်တာဗျုး
သူတို.ပြောတဲ့ ဦးရွှေမန်း နဲ. သူ.သားများအကြောင်း - ၄
သူတို.ပြောတဲ့ ဦးရွှေမန်း နဲ. သူ.သားများအကြောင်း - ၃
သူတို.ပြောတဲ့ ဦးရွှေမန်း နဲ. သူ.သားများအကြောင်း - ၂
သူတို.ပြောတဲ့ ဦးရွှေမန်း နဲ. သူ.သားများအကြောင်း - ၁
သမ္မတ ဖြစ်နိုင်ခြေ သုံးသပ်မှုများ နှင်. ဖြစ်စဉ်အပေါ်...
ကြံ.ခိုင်ရေး ခေါင်းဆောင်အပြောင်းအလဲ ပြည်ပအမြင်အချို.
၁၂ရက်ည သန်းခေါင်ယံ ဖြစ်ရပ် ရေးသားမှု နှင်. အင်တာဗျ...
မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း အမှားပြင်ဆင်ခွင့် လေးရက်သာ ကျန်ရှိ - ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးခွင့်ရှိသူစာရင်းကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပထမအဆင့်အဖြစ် ထုတ်ပြန်ရာမှာ အချက်အလက် လွဲမှားနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေချိန...
တာခြီလိတျတှငျ quarantine ဝငျနသေညျ့ ထိုငျးနိုငျငံမှပွနျလာသူ (၇၀)တှငျ COVID 19 ပိုးမတှေ့၍ နရေပျ quarantine ဝငျရနျလှဲပွောငျးပို့ဆောငျ
Man City complete signing of USWNT World Cup winner Sam Mewis - The 27-year-old midfielder joins the Women's Super League club from the North Carolina Courage